သငျသညျ, E-Scooter, Smart Scooter နှင့် E-စကိတ်စီးအကြားအကောင်းဆုံးကဘာလဲမကြိုက်ဘူးသလဲ? - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
သငျသညျ, E-Scooter, Smart Scooter နှင့် E-စကိတ်စီးအကြားအကောင်းဆုံးကဘာလဲမကြိုက်ဘူးသလဲ?
လျှပ်စစ် Scooter က၎င်း၏ဆုပ်ကိုင်အပေါ်ဦးတည်မှီခိုနေစဉ်လက်ကိုင်အဆင့်ပျက်ကျ, အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆုံးစွန်နှစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုလုံခြုံအဖြစ် weel အဖြစ်သင်ယူနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ဘရိတ် , ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ဘရိတ် function ကိုရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဘရိတ်နည်းလမ်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်, လျှပ်စစ် Scooter ရဲ့ဘရိတ်လက်တော်လီဗာ၏လက်ဝဲဘက်, စက်မှုဘရိတ်ဖြစ်ပါသည်တစ်ဘရိတ်ခလုတ်ကိုရှိပါတယ်, သငျသညျလညျးသငျရဲ့နောက်ကွယ်ကဘီး step နိုငျသညျ, က passive ဘရိတ်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါစမတ် Scooter နဲ့ လျှပ်စစ်စကိတ်စီးလူများနှင့်ယာဉ်များ၏ inertia နေပါစေ, အဘရိတ်ကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ဘာမြန်နှုန်းသူတို့တက်ကြွစွာဘရိတ်များမှာ, အဘရိတ်နှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာ 's ဘရိတ်, ပြောင်းပြန်ချိန်ခွင်လျှာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
speed , သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်၏မြန်နှုန်း လျှပ်စစ်စကိတ်စီး နိုင်စွမ်းတက်ပြီးအခြားနှစ်ခုထက် သာ. ကောင်း၏, အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်မြန်နှုန်း 30km / h ဖြစ်ပါသည်, ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 40km / h ဖြစ်ပါသည်, ပိုမြန်သွားပါ
Koowheel လျှပ်စစ် Scooter L8 သည် max ကိုမြန်နှုန်းခွင့်စက်ရုံအနေဖြင့် 25 km / h ဖြစ်ပါတယ် (ဒီ max ကိုမြန်နှုန်းအသုံးပြုသူ APP ကို ​​setting ကို thrugh 30KM / H ကိုမှချိန်ညှိနိုင်ပါသည်)
၏ max ကိုမြန်နှုန်း စမတ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter K5 15 ကီလိုမီတာ / H ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် L8 နှင့် လျှပ်စစ်စကိတ်စီးပိုမိုမြန်ဆန်ထက်များမှာ စမတ် Scooter မြန်နှုန်းပေါ်မှာ။ ကျနော်တို့ကဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားပါသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စကိတ်စီးအလုအယက်နာရီအတွင်းပိုမိုထိရောက်ပိုပြီးသိသာသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တိုတောင်းသောခရီးစဉ်များအတွက်ကောင်းသော tools များဖြစ်ကြသည်။